IParadesi yelizwe laseDevon
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguMagnus
Kutshanje ilungiswe kwaye inesitayile sale mihla indlu edityaniswe nendlu yelizwe eyaqala kwiminyaka engama-500 eyadlulayo.
Ekuqaleni indawo yokusebenzela le ndlu ihlala phezu kwenduli kufutshane ne-hamlet yakudala yaseBradstone enembono engakholelekiyo kumasimi elizwe kunye neentlambo phakathi kweBodmin moor kunye neDartmoor.
Ipropathi iqulathe iihektare ezingama-20 zamasimi amahashe nezinja, iigadi kunye nendawo enkulu yokutyela yangaphandle enendawo yomlilo.
Kuzolile kwaye ukude kodwa kukufutshane kuyo yonke into iDevon kunye neCornwall ekufuneka ibonelele
Kukho iibhedi zabantu abadala aba-3.
Ibhedi eyongezelelweyo inokubonelelwa abantwana njengoomatrasi
Ibekwe kwintlambo engekabikho e-Devon enemibono enomtsalane le ndlu ngumzekelo wamaphandle esiNgesi. Le ndlu isandula ukulungiswa inika imvakalelo yangoku kunye nebanzi ngelixa igcinwa nemvelaphi yayo.
Ezantsi kwendlela kuhlala umlambo iTamar kunye nomda oya eCornwall apho unxweme olusemantla luhamba ngemizuzu engama-35 kunye neProjekthi ye-Edeni iyure enye.
Kufuphi sineedolophu ezimbini zentengiso yakudala: iLaunceston eyakhiwa malunga nenqaba yenkulungwane ye-11 kufutshane ne-Bodmin Moor (iikhilomitha ezi-5.5) kunye neTavistock (i-9miles) edume ngemakethi ye-pannier eyaqala kwiminyaka engama-900 kunye neDartmoor.
Indlu ikwayimizuzu eli-10 yokuqhuba ukuya kuhola wendlela i-A30 kwaye inoluhlu lokukhetha lweendawo zokutyela ezibalaseleyo kunye ne-gastro pubs. (Uluhlu lweendawo zokutyela kunye neengcebiso ziya kuthunyelwa ngaphambi kokufika kwakho)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bradstone